मलाई लसुन झिंगा - व्यंजनहरु
V8 रस crock भाँडो संग बीफ स्टू
म कहाँ tortilla सूप खरीद गर्न सक्नुहुन्छ
मारिनारा सॉस र स्पेगेटी चटनी बीच के फरक छ?
नेभि बीन्स र उत्तरी गेडाहरू उस्तै छन्
मलाई लसुन झिंगा
रसीला, मोटा स्रीम्प क्रीमयुक्त लसुनको चटनीमा स्मोरेट गरे। यो विलासी स्वाद हो, यो रमाईलो छ र यो पूर्ण छ र पूर्ण खुशी छ कि छिटो र सजिलो छ, तपाईं यसलाई आज राती बनाउन सक्नुहुन्छ र यो क्रीमयुक्त लसुन झिंगा टेबलमा १ 15 मिनेटमा राख्न सक्नुहुन्छ!
झींगा मेरो मनपर्ने प्रोटीन मध्ये एक हो किनकि यो यति चाँडो बनाउनको लागि हो र आजकल साँच्चिकै महान् गुणस्तरको प्री-पिल गरिएको फ्रिजन झींगा सुपरमार्केटमा समेत बेचिन्छ। जबकि समुद्री खाना जहिले पनि राम्रो हुन्छ ताजा पकाउँदा, पूर्व-खुली फ्रिज गरिएको झींगाको सजिलो सुविधा व्यस्त साताको रातको लागि पिट्न गाह्रो हुन्छ।
लसुन बटर सॉसको साथ बेकन स्केलपहरू
र यो पनि कडा गाह्रो छ CREAM + GARLIC + SHRIMP को संयोजन एक बिरामी भीड pleaser को रूप मा! त्यो चटनी… .. त्यो चटनी मात्र अपूर्व छ। झिंगे माला देखि स्किलेटमा खैरो बिट्स क्रीममा मिसिन सकिन्छ र यो अहिलेसम्मको उत्तम स्टक बेस जस्तो छ। सँधै!
कम प्रतिद्वन्द्वी crock भाँडो अस्थायी
यो नुस्खा एकदम सिधा अगाडि छ। एउटा सानो कुरा जुन म प्राय: व्यंजनहरूमा अलि फरक गर्दछु लसुन थप्नु हो जब झिंगो आंशिक रूपमा पकाइन्छ। यसको कारण यो हो कि यदि तपाईंले लसुन पहिले थप्नुभयो भने, यो लसुन पकाइएपछि जलाइन्छ। लसुनको सानो जलाइएको तीतो बिट रमाईलो छैन, साथ साथै क्रीमी सेतो सॉसमा यो राम्रो देखिँदैन। त्यसो भए पछि यसलाई जोडेर, तपाईले सबै स्वाद पाउनुहुन्छ र यो जल्दैन। :-)
एक अर्को सानो टिप्स मसँग परमेसन चीज छन्। यसले स्वादको अतिरिक्त तत्व थप गर्दछ - umami - सॉसमा जुन यसलाई 'यम' बाट 'sooooo goooood' मा लिन्छ !!!! यो किन्नु राम्रो छ स्टोरको सट्टा ताजा grated parmesan प्रयोग गर्नु महत्त्वपूर्ण छ किनभने यो उत्तम छ र यसैले चटनीमा पग्लिनेछ। यो को लागी उस्तै हो अल्फ्रेड र कुनै पनि अन्य मलाईडी सॉसहरू जुन उनीहरूमा परमेसन चीज थपिएको छ - स्टोर किनेको परमेसन पूर्ण रूपमा विघटन हुने छैन त्यसैले तपाईं यसलाई रेसमको चिल्लो बनाउनुको सट्टा सासमा ग्रिट्टी बिट्सको साथ समाप्त गर्नुभयो।
मलाई यो क्रीमयुक्त लसुन झि .्गा सेवा गर्न मन पर्छ पास्ता वा मसलाएको आलुमा। तलको फोटोमा मैले काटिएको स्केलियन्सको माध्यमले आलुमा मिकें, केवल ताजाताका थोरै पपहरूको लागि। पातलो साग को एक द्रुत पक्ष सलाद, निम्बू को केही स्लाइसहरू, र रात्रीको खाना सेवा गरीन्छ!
स्टोभमा पोर्क स्ट्यु मासु कसरी पकाउने
तयारी समय। मिनेट कुक समय१ मिनेट कुल समय6 मिनेट सर्भिंगहरू। सर्विंग्स लेखकपेगमोटा रसदार झिंगे क्रीमयुक्त लसुनको चटनीमा धुम्रपान गरी। शुद्ध पूर्ण खुशी! प्रिन्ट गर्नुहोस् पिन
▢3 चम्मच अनसोल्टे माखन
▢१ पाउन्ड खुर्सिएको झिंगे माछा
▢3 लसुन लौंग बारीक काटिएको वा कीमा बनाइएको
▢½ कप ड्राई सेतो वाइन वा चिकन स्टक / शोरबाको साथ सब
▢¾ कप भारी क्रीम
▢¼ कप ताजा grated parmesan पनीर
उच्च तातो मा एक skillet मा माखन पिघल।
जब यो फोमिंग सुरु हुन्छ, झींगा थप्नुहोस्। तिनीहरूले पारदर्शी देखि सेतो मा परिवर्तन गर्न सुरु नगरेसम्म पकाउनुहोस्। लसुन थप्नुहोस्, २० सेकेन्डको लागि हलचल गर्नुहोस् - अब झींगा सेतो हुनुपर्दछ (तर अझै भित्र कच्चा छ)।
वाइन थप्नुहोस् - यो स्टीम र बबल चाँडै हुनेछ। Seconds० सेकेन्ड सम्म पकाउनुहोस् वा तपाईं अबदेखि रक्सीको गन्ध लिन सक्नुहुन्न र आधा वाष्फित हुँदैन।
क्रीम, parmesan, नुन, र काली मिर्च जोड्नुहोस्। १ मिनेट को लागी उमालेर वा यो अलि गाढा सम्म।
नुन र मरिच स्वाद को समायोजन गर्नुहोस्।
चाँडै नै सेवा गर्नुहोस्, छेउमा ताजा पार्सली र कागती पट्टिले सजिएको खण्डमा।
क्यालोरिज:397,कार्बोहाइड्रेट:3g,प्रोटिन:२g,मोटो:२g,पागलिएको बोसो:१g,कोलेस्ट्रॉल:4 374मिलीग्राम,सोडियम:6 996मिलीग्राम,पोटासियम:१44मिलीग्राम,भिटामिन ए:70 .०IU,भिटामिन सी:.6.मिलीग्राम,क्यालसियम:२2२मिलीग्राम,फलाम:२.6मिलीग्राम
कीवर्डलसुन झींगा कोर्सबेलुकाको खाना पकाइयोअमेरिकी© SpendWithPennies.com। सामग्री र फोटोग्राफहरू प्रतिलिपि अधिकार सुरक्षित छन्। यस नुस्खाको साझेदारीलाई दुवै प्रोत्साहन र सराहना गरिन्छ। कुनै पनि सोशल मिडियामा पूर्ण रेसिपीहरू प्रतिलिपि गर्न र / वा टाँस्न कडा निषेधित छ। कृपया यहाँ मेरो फोटो प्रयोग नीति हेर्नुहोस् ।
यदि तपाइँ क्रीमी सॉस मन पराउनुहुन्छ, तपाईं यसमाथि पागल जानुहुन्छ क्रीमी चिकन र बेकन पास्ता !
क्रीम चीज संग सजीलो चिप डुबकी
यो मलाईदार झिल्ली पास्ता सलाद एक राम्रो पक्ष वा खाजा डिश बनाउँछ।